Norombahin’i Tafanga Daniella ny tompondakan’ny Ranomasimbe indianina teo amin’ny taranja tenisy, izay natao tatsy amin’ny nosy La Réunion.
Nomontsaniny avokoa ireo mpifanandrina taminy teo amin’ny sokajy misy azy, izay nisy ny nosy Maorisy, Seychelles, Comores, ary La Réunion.
Noho ny ezaka goavana vitan’ity ankizivavy kely 8 taona, izay avy ao amin’ny faritra Antsiranana ity, dia nanome fankasitrahana aazy ny Lehiben’ny faritra Atsinanana, Alain Mahavimbina. Tamin’ny talata lasa teo no nanolorana azy vola 300 000 ariary, ho valin-kasasarany, tao amin’ny biraon’ny faritra. « Noho ny nitondrany avo ny voninahitry ny faritra Atsinanana sy ny voninahi-pirenena tany an-tanin’olona tany no anton’izao fanomezana izao », hoy ny Lehiben’ny faritra.
Mpianatra ao amin’ny sekoly frantsay iray ao Toamasina i Tafanga Daniella ary ao amin’ny kilasy CM2 izy ankehitriny. Tao amin’ny klioba CRJS Toamasina kosa no misy azy amin’ny filalaovana tenisy.